Kolombia: Hetsika Fanoherana Ny Habibiana Atao Amin’ny Biby Fanaovana Fampisehoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jona 2018 13:37 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, 繁體中文, 简体中文, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jolay 2008)
Tao Bucaramanga, ny Alatsinainy 7 jolay 2008, nanao hetsika tamim-pilaminana ny fikambanana AHURA (Asociacion Humanitaria de Rescate Animal) ho fanoherana ilay sirka (Cirque) meksikana Hermanos Gasca izay mampiasa biby ao anatin'ny sasany amin'ireo fampisehoana ataony. Ao amin'ny pejy Facebook-n'izy ireo izay natokana ho an'izany, avoitran'izy ireo ihany koa ny fomba nahafahan'ny hetsika tao Pereira, ao amin'ny tanàna kolombiana iray, mba hamotsorana elefanta kely iray, izay ankehitriny dia voaaro amin'ny fampijaliana, any anaty valam-piarovana biby. Niparitaka tao amin'ny aterineto ireo lahatsary mampiseho fampijaliana atao amin'ireo bibina sirka tao amin'ny faritra ary niteraka hetsi-panoherana sy fametraham-panontaniana mikasika ny zavatra tena mitranga any anatin'ireo sirka mitoetra ao Kolombia. Sary avy amin'ny blaogin'i Ivonne Garzon izay nitatitra an-tsoratra ireo hetsika tamin'ny volana Aprily lasa teo.
Ity ambany ity ilay lahatsary misy ampahany dimy mikasika ireo hetsi-panoherana am-pilaminana izay ahitana tanora eo alohan'ilay sirka ary mihiaka hoe (ao amin'ilay ampahany fahatelo) : « Tsy manan-tsafidy ny biby, isika no misafidy amin'ny toerany ». Afaka jerena ao amin'ny Youtube ireo lahatsary fohy nampiakarin'ny AHURA .
Ity lahatsary manaraka ity, ratsy kalitao, dia nozarain'i nanisper, mpampiasa Youtube iray. Somary mamerina ny feo niainana, mampiseho ireo mpanao fihetsiketsehana eny am-pitan'ny arabe ary ireo bibin'ny sirka izy ity, mandra-panakaikin'ny olona iray ilay olona naka lahatsary ary nandrahona azy im-betsaka ny hanisy totohondry azy raha toa ka tsy pihany ilay fakantsariny.
Vondrona kolombiana iray hafa no niezaka ny haka lahatsary tao ambadik'ireo fefy, ny zavatra iainan'ireo tigra sy biby hafa fa norakofan'ireo mpiasan'ny sirka labasy ireo fefy, ary lamba kosa ireo tranom-biby, mba tsy hahafahana mandrakitra sary, toy ny asehon'ity lahatsary manaraka ity.
Tsy vao voalohany ity hetsi-panoherana ny fampiasana biby ity ary tsy vao voalohany no nahenoana momba ny sirka Hermanos amin'ny lafiny fampijaliana biby. Tsy ela akory izay, niparitaka teny anivon'ireo blaogy kolombiana ny lahatsary noraketina tamin'ny fomba miafinkafina momba ny fampijaliana ny biby any amin'ny sirka [es], manabaribary ny fihetsiky ny sirka Hermanos Gasca. Nanintona ny sain'ny rehetra ireo sary mahatohina nahitàna ragidro torahana vato, elefanta kapohin'ny mpamehy azy eo amin'ny lohany mandritra ny fampandroana azy, zirafy maty ary tpatapahana an-tsokosoko mba hanariana azy amin'ny fomba miafina, liona mihidy anaty tranom-biby vita avy amin'ny vatosokay sy vy anaty orampanàla ary bera avy any an-tendrontany mihidy ao anaty kamiao izay fitaovana mpampifofofofo rivotra fotsiny no manome hatsika azy. Fa toa hadisoan'ilay fantsona televiziona kolombiana ireo ehetra ireo, izay, araka ny asehon'ilay lahatsary Youtube [amin'ny teny espaniola], dia niala-tsiny teo amin'ny fahitalavitra noho ny faniriany hanao izay hampientanentana fotsiny. Nahazo sary avy aminà fikambanana avy any ivelany ho halefa amin'ny ‘flash ‘ manokana ilay fantsona, sary izay heverina ho nalaina tao amin'ny sirka Hermanos Gasca ary nanaovany lohahevitra narahana tafatafa ary tsy nisy nahafantatra mihitsy hoe efa niparitaka be tao amin'ny aterineto ireo sary ireo, ary mamnpiseh ny tontolon'ireo herisetra rehetra afaka atao amin'ny biby any amin'ny sirka izy ity fa tsy hoe ny sirka Hermanos Gasca manokana. Ity fandaharana noraketin'ny televiziona ity, namboarina sy nozarain'ny olon-kafa, dia toa nampiseho fa hoe ny sirka Hermanos Gasca irery ihany no tomponandraikitra. Na izany aza, nanaiky ny sirka fa ilay elefanta voadaroka nandritra ny fampandroana azy dia tao amin-dry zareo tokoa no noraketina an-dahatsary ary efa voaroaka ilay mpamolaka azy.